Utility Coin စျေး - အွန်လိုင်း UTIL ပွောငျး
စျေးနှုန်းနှင့် ပွောငျး ကို Utility Coin (UTIL)
သငျသညျ (ကစျေးနှုန်းအရ) ပွောငျး လိုအပ်နေသောကြောင့်သင်ဒီမှာဖြစ်ကောင်းဖြစ်ကြ Utility Coin (UTIL) နိုင်ငံခြားငွေကြေးသို့မဟုတ်အွန်လိုင်း cryptocurrencies မှ. ထက်ပိုမိုပြောင်းလဲနိုင်ဖို့ထက်ပိုမိုလွယ်ကူဘာမှမရှိဘူး 170 ငွေကြေး နှင့် 2500 cryptocurrencies ဤတွင်, အွန်လိုင်းကျွန်တော်တို့ရဲ့ငွေကြေး ပွောငျး ကိုသင်အခုလုပ်ကူညီပေးပါမည်။ မရင့်ပြောင်းလဲဖို့အခမဲ့ခံစားရ Utility Coin ဒါပေမယ့်လည်းမဆိုအခြားရရှိနိုင်ငွေကြေး။
သငျသညျမှာအားလုံးကြည့်ရှုရန်အဘို့အဖြစ်ကောင်းဖြစ်နိုင်ပါကစိတ်ဝင်စားဖို့ဖြစ်လိမ့်မည် လဲလှယ်၏နှုန်းထားများ Utility Coin တဦးတည်းစာမျက်နှာပေါ်တွင်.
Utility Coin များ၏စျေးနှုန်းများ ကမ္ဘာ့အဓိကငွေကြေး
Utility CoinUTIL သို့ အမေရိကန် ဒေါ်လာUSD$0.0756Utility CoinUTIL သို့ ယူရိုEUR€0.0639Utility CoinUTIL သို့ ဗြိတိသျှ ပေါင်GBP£0.0578Utility CoinUTIL သို့ ဆွစ် ဖရန့်CHFSFr.0.0688Utility CoinUTIL သို့ နော်ဝေ ခရိုဏာNOKkr0.673Utility CoinUTIL သို့ ဒိန်းမတ် ခရိုဏာDKKkr.0.476Utility CoinUTIL သို့ ချက်ခိုရိုနာCZKKč1.67Utility CoinUTIL သို့ ပိုလန်ဇလော့တီPLNzł0.281Utility CoinUTIL သို့ ကနေဒါ ဒေါ်လာCAD$0.1Utility CoinUTIL သို့ ဩစတြေးလျ ဒေါ်လာAUD$0.105Utility CoinUTIL သို့ မက္ကဆီကို ပီဆိုMXNMex$1.66Utility CoinUTIL သို့ ဟောင်ကောင် ဒေါ်လာHKDHK$0.586Utility CoinUTIL သို့ ဘရာဇီး ရီးယဲBRLR$0.41Utility CoinUTIL သို့ အိန္ဒိယ ရူပီးINR₹5.66Utility CoinUTIL သို့ ပါကစ္စတန် ရူပီးPKRRe.12.77Utility CoinUTIL သို့ စင်္ကာပူ ဒေါ်လာSGDS$0.104Utility CoinUTIL သို့ နယူးဇီလန် ဒေါ်လာNZD$0.116Utility CoinUTIL သို့ ထိုင်းဘတ်THB฿2.35Utility CoinUTIL သို့ တရုတ် ယွမ်CNY¥0.526Utility CoinUTIL သို့ ဂျပန်ယန်းJPY¥8.06Utility CoinUTIL သို့ တောင်ကိုရီးယား ဝမ်KRW₩89.79Utility CoinUTIL သို့ နိုင်ဂျီးရီးယားနိုင်းရာNGN₦29.22Utility CoinUTIL သို့ ရုရှ ရူဘယ်RUB₽5.51Utility CoinUTIL သို့ ယူကရိန်း ဟီရီဗင်းညားUAH₴2.07
Utility CoinUTIL သို့ BitcoinBTC0.000007 Utility CoinUTIL သို့ EthereumETH0.000197 Utility CoinUTIL သို့ LitecoinLTC0.00139 Utility CoinUTIL သို့ DigitalCashDASH0.000834 Utility CoinUTIL သို့ MoneroXMR0.000849 Utility CoinUTIL သို့ NxtNXT5.9 Utility CoinUTIL သို့ Ethereum ClassicETC0.0111 Utility CoinUTIL သို့ DogecoinDOGE21.83 Utility CoinUTIL သို့ ZCashZEC0.000918 Utility CoinUTIL သို့ BitsharesBTS2.33 Utility CoinUTIL သို့ DigiByteDGB2.42 Utility CoinUTIL သို့ RippleXRP0.269 Utility CoinUTIL သို့ BitcoinDarkBTCD0.00261 Utility CoinUTIL သို့ PeerCoinPPC0.251 Utility CoinUTIL သို့ CraigsCoinCRAIG34.47 Utility CoinUTIL သို့ BitstakeXBS3.23 Utility CoinUTIL သို့ PayCoinXPY1.32 Utility CoinUTIL သို့ ProsperCoinPRC9.49 Utility CoinUTIL သို့ YbCoinYBC0.00004 Utility CoinUTIL သို့ DarkKushDANK24.28 Utility CoinUTIL သို့ GiveCoinGIVE163.86 Utility CoinUTIL သို့ KoboCoinKOBO17.24 Utility CoinUTIL သို့ DarkTokenDT0.0697 Utility CoinUTIL သို့ CETUS CoinCETI218.51
ငွေလဲနှုန်းကိုနောက်ဆုံးရေးသားချိန်: Sat, 15 Aug 2020 08:50:03 +0000.